Sagaal Ruux oo Soomaali ay ku jiraan oo Cudurka Malaariyada ugu geeriyootay Xerada Qaxootiga Kakuma | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Sagaal Ruux oo Soomaali ay ku jiraan oo Cudurka Malaariyada ugu geeriyootay...
Sagaal Ruux oo Soomaali ay ku jiraan oo Cudurka Malaariyada ugu geeriyootay Xerada Qaxootiga Kakuma
Muqdisho(SONNA) Sagaal Qof ayaa Cudurka Malaariyada (duumada) ugu geeriyootay xerada qaxootiga Kakuma iyo degaanka Kalobeyei ee dalka Kenya ka dib markii cudurku ka dillaacay aaggaas.
War ka soo baxay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Arimaha Qaxootiga ee UNHCR,ayaa lagu sheegay in kumanaan Kiisas malaariyo ah laga soo wariyay labadii bilood ee ugu danbeysay xerada Qaxootga Kakuma iyo deegaanka Kalobeyei ee dalka Kenya.
Xerada Qaxootiga ee Kakuma ayaa waxaa marti ku ah Qaxooti fara badan oo ka kala yimid dalalka Ethiopia,Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan kuwaasoo halkaasi ay ku taageeraan Hay’ado ka shaqeeya Arimaha bini-aadanimada.
Tiro dad lagu qiyaasay sagaal ruux ayaa ugu geeriyootay Cudurka deegaanka Kalobeyei iyo Xerada Qaxootiga Kakuma,sida warbixinta Hay’adda UNHCR lagu xusay.
Ku dhawaad 12,000-Kiisas malaariyo ah ayaa laga daweeyay Shacabka Qaxootiga ee ku dhaqan Xerada Kakuma iyo dadka ku nool deegaanka Kalobeyei tan iyo bishii Augusto ee sanadkaan 2017-ka.
UNHCR,ayaa sidoo kale sheegtay iney jiraan Kiisaska Cudurka Malaariyada oo kor u sii kacaya Xeryaha Qaxootiga iyadoo loo aaneynayo xilli roobaadka oo la guda galay.
Hay’adda ayaa Xustay in shaqsiyaadka uu sameeyay Cudurka Malaariyada (plasmodium falciparum),hadda lagu daweynayo xarumo caafimaad oo kala duwan oo ku yaalo Xerada Qaxootiga Kakuma.
Xarumaha caafimaadka ee ku yaalo Xerada Kakuma iyo deegaanka Kalobeyei ayaa lagu diyaariyay dawada malaariyada oo lagu daweynayo dadka xaaladooda yara roon tahay iyo kuwa sida ba’an uu cudurka u hayo.
Hay’adda Caafimaad Aduunka (WHO),ayaa xeryaha ka howlgelisay dhalinyaro loo carbiyeyay iney bulshada ka wacyigeliyaan halista uu leeyahay cudurkaan iyo qaabka ugu haboon ee looga hortagi karo.
W/Q: Daahir Aadan Ali
Previous articleKu-Simaha Ra’iisul Wasaaraha oo ka tacsiyadeeyey Geeridii Jeneral Maxamed Abshir Muse
Next articleTaliyaha Ciidamada xooga dalka oo ka tacsiyadeeyey Geeridii Jeneral Maxamed Abshir Muse